जेठ महीनाको पहिलो कारोबार दिन १० अर्ब ४० करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार | Business TV Nepal
जेठ महीनाको पहिलो कारोबार दिन १० अर्ब ४० करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार
जेष्ठ २,काठमाण्डौ ।शेयर बजार परिसुचक नेप्से आइतवार ५४ दशमलव २१ अंकले वृद्धि भएर २ हजार ७३८ दशमलव २९ पुगेको छ । त्यसैगरी ‘क’ वर्गका कम्पनिको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स ८ दशमलव ६४ अंकले बढेर ४८८ दशमलव १४ पुगेको छ ।आइतवार शेयर बजारमा रू. १० अर्व ४० करोड ३८ लाख ७९ हजार बराबरको कारोवार भएको छ ।आइतवार २१ करोड ३२ लाख ८ हजार ८८२ कित्ता शेयरको कारोबार भएको हो । सो कारोवार १ लाख १३ हजार ६९ पटकमा खरिद बिक्री भएको हो।
आइतवार बैकिङ,विकास बैक र फाइनन्स तिनै वित्तिय क्षेत्रको समुहगत परिसुचकमा वृद्धि भएको छ । बैकिङ क्षेत्रमा १ दशमलव ५४ प्रतिशतले , विकास बैक क्षेत्रमा ३ दशमलव ८७ प्रतिशतले र फाइनन्स क्षेत्रमा १ दशमलव १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । त्यसैगरी हाइद्रोपावर क्षेत्रमा १ दशमलव १५ प्रतिशतले, व्यापार क्षेत्रमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले,माइक्रो माइनन्स क्षेत्रमा १ दशमलव ८९ प्रतिशतले र होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रमा १दशमलव ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आइतवार रू रू जलविद्युत् परियोजनाको शेयरमूल्य सर्वाधिक १० प्रतिशत बढेर सबै भन्दा बढी नाफा कमाएको छ । आइतवार रू रू जलविद्युत् परियोजनाको प्रतिकित्ता रू. ८० ले बढेर यो दिन अन्तिम मूल्य रू. ८८० कायम भएको छ । महिला लघुवित्तको प्रतिकित्ता रू. १४६ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ६०६ कायम भएको छ । त्यस्तै शिखर इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९७ प्रतिशत, समता घरेलु लघुवित्तको ९ दशमलव ९५ प्रतिशत , सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकको ९ दशमलव ९० प्रतिशत, प्रोग्रसिभ फाइनान्सको ९ दशमलव ९० प्रतिशत शेयरमूल्य बढेको छ ।आइतवार सबै भन्दा बढी कारोवार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ओगटेको छ । उक्त कम्पनीको रू. ८५ करोड २० लाख ३ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो।
आइतवार सुनको मुल्यमा ९सयले वृद्दि